Yintoni na ke ukugqithisela kumatshini CNC Swiss kuthelekiswa ulawulo lathe wokwamanani? - China Shandong New Ankai-Kitco
Yintoni na ke ukugqithisela kumatshini CNC Swiss kuthelekiswa ulawulo lathe wokwamanani?
Lo matshini Swiss cnc bobabo izixhobo ngqo processing, kwaye ungakwazi na ukugqibezela machining entsonkothileyo zezithuthi, umama, ukubhola, ekruqulayo, nangokukrola yaye sidlala ngexesha elifanayo. Oku esisetyenziselwa batch processing okuchaneka hardware kunye iindawo ezikhethekileyo ezimilise mphini ezingekho semgangathweni.
Ngenxa isakhiwo kumatshini ukuhamba yahlukile kule lathe zemveli ulawulo ngokwamanani, le machining ukusebenza machining ngqo kumatshini ukuhamba ziphakamile kunolo NC owodwa umshini. Aqikelele ilungiselelo biaxial esi sixhobo yoyilo, usindisa kakhulu ixesha kumjikelo processing, indlela ixesha lotshintshiselwano kunye nesixhobo kwisixhobo umatshini ngokuthi kuphungulwe imela, multi isikhululo isixhobo ukudibana kunye nomsonto chip yezihlunu olusebenzayo uhambisa imisebenzi sifana kakhulu, osimelela ngentonga ngqo nezikhokelo umsebenzi izihlandlo ezibini ngexesha processing, ukunqumlela ixesha cleaner. Isixhobo Chip ukusika idlala indima ebaluleke kakhulu kwinkqubo machining of edibanise kunye workpiece nokubotshwa iindawo. Inika siqinisekiso ngokwenene rhoqo machining nokuchaneka. Xa Ngenxa imarike umatshini intliziyo, 38mm yeyona inkulu ubukhulu bayo processing, nto leyo eyenza ukuba umatshini ukuhamba ithatha inzuzo enkulu kwimarike elihambisayo ngendlela axis. Olu thotho izixhobo machine nazo izixhobo isixhobo lweehagu oluzenzekelayo, leyo uyaqonda imveliso ezenzekelayo ngokupheleleyo lwesixhobo umatshini olunye, kunciphisa iindleko zabasebenzi kunye neemveliso nokubi kwinkqubo yemveliso, kwaye zingasetyenziswa ukuvelisa izixa ezikhulu amalungu ngendlela shaft.
Ukusebenza machining kunye machining accuracy ngaphezu NC lathe iye uvale qualitative, ngenxa isixhobo lungiselelo kabini, ukunciphisa kakhulu ixesha kumjikelo processing, kunye nexesha ukutshintshiselana isixhobo phezu kwencochoyi yesixhobo kumatshini ngokuthi kuphungulwe imela, multi ukudibana umsebenzi station isixhobo, umsonto ukunciphisa yezihlunu ngempumelelo uhambisa emsebenzini, umsebenzi edibanise nezikhokelo ngqo ixesha ezimbini xa inkqubo, qonda ixesha iyanqanyulwa. Esi sixhobo ukusika lusoloko ngomshini kwi nokubotshwa inxalenye osimelela ngentonga kunye workpiece, eqinisekisa ngendlela lomgadi ukuchana machining. Okwangoku, esi machining ubukhulu iphezulu umatshini wentliziyo akukho bathengi 38mm, kanti lishiya ityhefu apho inzuzo enkulu kwimarike elihambisayo ngendlela axis. Olu thotho izixhobo machine unako mayixhotyiswe isixhobo esizilawulayo zokondla xiya ukuveliswa oluzenzekelayo isixhobo umatshini enye, inciphise neendleko zabasebenzi kunye nezinga kakubi kwemveliso. Kufanelekile kakhulu ngobuninzi amalungu ngendlela shaft.